Emọs 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
6 “Ahụhụ ga-adịrị ndị tụsaara ahụ́+ na Zayọn na ndị tụkwasịrị ugwu Sameria obi! Ha bụ ndị a na-akwanyere ùgwù n’ime mba bụ́ isi n’etiti mba niile, ụlọ Izrel abịakwutewokwa ha. 2 Gaanụ Kalne, gaanụ hụrụ; sikwanụ n’ebe ahụ gaa Hemat+ nke nwere ụba mmadụ, gbadaanụ Gat+ nke ndị Filistia. Ọ̀ bụ ha ka alaeze ndị a mma, ka ókèala ha ọ̀ karịrị ókèala unu?+ 3 Ùnu na-ewepụ ụbọchị ọdachi n’obi unu,+ ùnu na-emekwa ka ime ihe ike biri ebiri n’etiti unu?+ 4 Unu ndị na-edina n’ihe ndina e ji ọdụ́ rụọ,+ ndị na-agbatịkwa onwe ha n’ihe ndina ha, ndị na-eri ebule ndị e nwere n’ìgwè atụrụ, na-erikwa ụmụ oké ehi si n’ime ụmụ ehi mara abụba;+ 5 ndị na-echepụta abụ dị ka ụda ụbọ akwara+ si dị; ndị rụụrụ onwe ha ngwá egwú dị ka Devid rụrụ;+ 6 ndị ji ọkwá na-aṅụ mmanya,+ ndị na-ejikwa mmanụ kasị mma+ ete mmadụ mmanụ, ndị ọdachi dakwasịrị Josef na-emeghị ka ha daa ọrịa.+ 7 “Ya mere, a ga-adọrọ ha n’agha. Ha ga-abụ ndị mbụ a ga-adọrọ n’agha.+ Oriri oké mkpọtụ nke ndị na-agbatị onwe ha n’ihe ndina ga-akwụsịkwa. 8 “‘Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova ejiriwo mkpụrụ obi ya ṅụọ iyi,’+ ka Jehova bụ́ Chineke nke ụsụụ ndị agha kwuru, ‘“akpọrọ m mpako Jekọb asị,+ akpọkwara m ụlọ elu ya niile asị.+ M ga-enyefe obodo ahụ na ihe jupụtara n’ime ya n’aka ndị iro ya.+ 9 Ọ ga-erukwa na ọ bụrụ na ụmụ nwoke iri afọdụ n’otu ụlọ, ha ga-anwụ.+ 10 Nwanne nna otu n’ime ha ga-ebupụ ha n’otu n’otu ma kpọọ ha ọkụ n’otu n’otu. Ọ ga-esi otú a si n’ụlọ chịpụta ọkpụkpụ ha.+ Ọ ga-asịkwa onye ọ bụla nọ n’ime ime ụlọ ahụ, ‘Ọ̀ dị onye ọzọ gị na ya nọ?’ Ọ ga-azakwa, sị, ‘Ọ dịghị!’ Ọ ga-asịkwa, ‘Gba nkịtị! N’ihi na ugbu a abụghị oge ịkpọ aha Jehova.’”+ 11 “‘N’ihi na, lee, Jehova na-enye iwu,+ ọ ga-akụ nnukwu ụlọ righirighi, kụriekwa obere ụlọ.+ 12 “‘Ịnyịnya ọ̀ ga-agba ọsọ n’elu nkume dị elu, ka mmadụ ọ̀ ga-eji ehi kọọ ihe na ya? N’ihi na unu emewo ka ikpe ziri ezi ghọọ ahịhịa na-egbu mmadụ,+ meekwa ka mkpụrụ nke ezi omume ghọọ ahịhịa ilu, 13 unu ndị na-aṅụrị ọṅụ n’ihi ihe na-adịghị adị;+ ndị na-asị: “Ọ́ bụghị ike anyị ka anyị ji nweta mpi?”+ 14 Lee! Unu ụlọ Izrel, m ga-eme ka otu mba bịa buso unu agha,’+ ka Jehova bụ́ Chineke nke ụsụụ ndị agha kwuru, ‘ha ga-emegbukwa unu malite n’ebe e si abanye Hemat+ ruo n’iyi ndagwurugwu Araba.’”